Ciidamada Booliska oo Shaaciyey dadka Loo Xidhay Xamdi Maxamed oo la diley | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Ciidamada Booliska oo Shaaciyey dadka Loo Xidhay Xamdi Maxamed oo la diley
Sep 15, 2020 - 1 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Taliska ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa si rasmi ah u shaaciyay in 11 ruux oo lagu eedeynayo kufsigii iyo dilkii allaha u naxariistee Xamdi Maxamed Faarax loo xirey baaritaana uu ku socdo.
“Illaa 11 ruux ayaa hadda gacanta booliska ku jira waxaana lagu hayaa baaritaan sidoo kale waxaan ku dabajoognaa dad kale oo la tuhmao inay ku lug leeyihiin dilkii iyo kufsigii lagula kacay Xamdi Maxamed Faarax.” ayuu yidhi afayeenka ciidanka booliska oo maanta weriyaasha la hadlay.
Raggii kufsaday Xamdi ee nolosha dhaafiyay ha laga soo bixiyo xabsiga ee hala daldalo, wixii intaas kasoo hara waxaan u arkaa musalsal ay somalidu jilayaan, simple is that.
Iyagana dabaqa ha laga soo tuuro🖐